သင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ရေးကို အဆင်မပြေစေတဲ့ အပြုအမူ (၇) ချက်
HomeLove သင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ရေးကို အဆင်မပြေစေတဲ့ အပြုအမူ (၇) ချက်
H August 19, 2020
ချစ်သူ နှစ်ယောက်ကြားမှာ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပြီ ဆိုရင် တစ်ယောက်ကို တယောက် အပြစ်တွေ တင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြန်အဆင်ပြေဖို့ အတွက်တော့ အချိန်တွေ ယူရတတ် ပါတယ်။ အဆင်မပြေဖြစ်စေတဲ့ အပြုအမူလေးတွေကို ရှောင်လိုက်နိုင်ရင် ပိုပြီးပျော်စရာ ကောင်းလာမှာပါ။
1. ဖုန်းကို စွဲလမ်းခြင်း
သင့်ရဲ့ အားလပ်ချိန်တွေမှာ ဖုန်းကိုပဲ အမြဲသုံးနေရင်၊ ဖုန်းကို စွဲလမ်းနေရင် မကောင်းပါဘူး။ အဲဒီအခါ သင့်ချစ်သူအပေါ် အရေးမလုပ်ရာ ကျသွားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဖုန်းကို မစွဲလမ်းအောင် စာဖတ်ခြင်း၊ အိမ်အလုပ် လုပ်ခြင်းတွေနဲ့ အာရုံပြောင်းလို့ ရပါတယ်။
အလုပ်မှာ တကယ် အလုပ်များနေတယ် ဆိုရင်တောင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စအတွက် အချိန်ဖယ်ထားသင့်ပါတယ်။ သင့်ချစ်သူနဲ့ အတူ နှစ်ပတ်တစ်ခါ အပြင် ထွက်လည်ခြင်း၊ နှစ်လတစ်ခါ ခရီးတိုထွက်ခြင်း၊ နှစ်နှစ်တစ်ခါ ခရီးရှည် ထွက်ခြင်းက သင်တို့နှစ်ယောက်ကို ပိုရင်းနှီးစေမှာပါ။
3. အသိအမှတ် ပြုဖို့ မေ့နေခြင်း
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ စကားကို အသေးအဖွဲလို့ ထင်ကြပြီး ပြောဖို့ မေ့နေတတ်ကြ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ချစ်သူက တစ်ခုခု လုပ်ပေးရင် ကျေးဇူးတင်တဲ့စကား ပြောဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ ဘယ်သူမဆို ကြင်နာတတ်တဲ့ စကားလေးတွေကို ကြားချင်ကြ ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောခြင်းက သူ့ကို အသိအမှတ်ပြုရာ၊ အလေးထားရာ ရောက်စေ ပါတယ်။
4. သာမန်လောက်သာ စကားပြောခြင်း
တကယ်ချစ်ကြတဲ့ သူတွေက တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း၊ ရင်းရင်းနှီးနှီး စကားပြောတတ်ကြပါတယ်။ အလုပ်မှာ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေ၊ ဟာသလေးတွေကို တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ပြောပြပြီး နားထောင်ပေးသင့် ပါတယ်။ သာမန်လောက်သာ စကားပြောခြင်းက သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကို အေးစက်သွားစေနိုင် ပါတယ်။
5. အသေးအဖွဲ ကိစ္စလေးတွေကို ဒေါသထွက်ခြင်း
သင့်ချစ်သူကို နေရာတကာ အပြစ်မတင် ပါနဲ့။ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ အရာရဲ့ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးတွေကို သူကိုယ်တိုင် မြင်လာအောင် ပြောပေးခြင်းက ပိုအဆင်ပြေစေ ပါတယ်။
6. ညှိနှိုင်းမှု မရှိခြင်း
ပြဿနာ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အခါ ပြေလည်တဲ့ အထိ အာရုံစိုက်ပြီး ဖြေရှင်းသင့် ပါတယ်။ ရန်ဖြစ်ပြီ ဆိုရင် တစ်မိနစ်လောက် အခန်း အပြင်ဘက်ကို ခဏထွက်နေ လိုက်ပါ။ အဲဒီအခါ စိတ်လည်း တည်ငြိမ်ပြီး ဒေါသလည်း လျော့သွားမှာပါ။ စိတ်တည်ငြိမ်ပြီးမှ ပြဿနာ ဖြေရှင်းတာ ပိုထိရောက် ပါတယ်။
ယုံကြည်မှုက နေရာတိုင်းမှာ အရေးပါ ပါတယ် ။ သင့်ချစ်သူနဲ့ ပိုအဆင်ပြေစေ ချင်ရင် သူ့ကို ယုံကြည်ပေး လိုက်ပါ။ အဲဒီအခါ သင့်အပေါ် ရိုးသားလာ ပါလိမ့်မယ်။ သူအလုပ် လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ တစ်ခါတလေ ဖုန်းဆက်တာ ကိစ္စမရှိပေမယ့် ခဏခဏ ဖုန်းဆက်နေရင် သူ့ကို မယုံကြည်ဘူးလို့ ထင်သွားပါလိမ့်မယ်။ သံသယတွေက သင်တို့ကို ဝေးစေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ယုံကြည်မှုထားတာ အကောင်းဆုံး ပါပဲ။